Vol. 13 SEPTEMBA, 1911. 6
IMODIA yesayensi sele ivumile okokugqibela Flying kwintsapho yayo yesayensi ehloniphayo, phantsi kwegama pneumatics, aerostatics, aeronautics okanye ukuhamba ngenqwelomoya. Oomatshini bokubhabha ngeenqwelomoya bangafundwa kwaye benziwe nayiphina indoda efanelekileyo ngaphandle kokuphulukana nokuma kwayo kwezenzululwazi.
Kwiinkulungwane ezininzi kuye kwakho amadoda afanelekileyo, afanelekileyo, kunye nabazobi kunye nabazobi abathandekayo phakathi kwababango kulwazi lwesayensi yokubhabha. Kude kube leli xesha i-orlando yesayensi sele ilwile kwaye ibambe intsimi ngokuchasene nabo bonke ababango. Sele kulilizwe elide kwaye kunzima. Indoda yesimilo iye yagwetywa ngokufanayo okanye ukugculelwa njenge-charlatan kunye nopopu. I-aviator ngoku ibhabha ngokuhlaziyayo emoyeni okanye iphakame kwaye iwele, iindudumo okanye amadada okanye amantshontsho ngamanani anqabileyo ngaphambi kokuvuma ababukeli, iyakwazi ukwenza oko ngenxa yomtya omde wamadoda, ukufikelela kwiinkulungwane ezidlulileyo ukuza kuthi ga ngoku, ngubani owenza impumelelo yakhe inokwenzeka kuye. Banyamezele ukugculelwa okukhulu nochuku olunikwa ngokukhululekileyo; ufumana umvuzo omkhulu kwaye ufumana iindumiso zokudumisa izihlwele.
Inzululwazi yokubhabha ayamkelwa okanye yamkelwa ngokulula kwisangqa sezenzululwazi ezamkelweyo ngabavoti bayo banikwa isihloko sokuhlonelwa kwesayensi. Amadoda enzululwazi avunyiweyo avume isayensi yokubhabha kwinani labo kuba kwakufuneka. Ukubhabha kwaqinisekiswa kwaye kwabonakaliswa kwiimvakalelo njengezibakala, kwaye akunakuphikwa. Yamkelwa ke.
Yonke ithiyori mayingeniswe kuvavanyo kwaye ingqinwe ngaphambi kokuba yamkelwe njengenyaniso. Le iyinyani kwaye ilunge kakhulu iyakuqhubeka kwaye iyoyise yonke inkcaso ngexesha. Kodwa inkcaso iboniswa kwizinto ezininzi ngaphandle koko kungokwangoku isayensi ithintelwe, ithintele iingqondo eziqeqeshelwe ingcinga zesayensi ekuthatheni iingcebiso nasekuziseni iingcinga ezithile ezinokuba ziluncedo olukhulu emntwini.
Isimo sengqondo sesayensi esigunyazisiweyo-sokungakhathali malunga nezifundo ezingaphandle kwaye azamkelwa- kukujonga ukonyuka namandla obuqhetseba kunye nabalandeli, abakhula njengokhula kwindawo yempucuko. Ukuba bekungengenxa yesi simo sengqondo sesayensi, ubuqhetseba, ubutshaba kunye nezitshabalalisi zababingeleli kungathi, njengokhula olungenakonakala, zikhule kwaye zigqume, kugcwala abantu okanye kujikeleze iingqondo zabantu, ebeya kuguqula igadi yempucuko ibe yihlathi lokuthandabuza kunye noloyiko. Ingqondo yokubuyela kukungaqiniseki kweenkolelo apho uluntu lwakhokelwa yisayensi.
Xa ujonga ukungazi okuyo yonke imilinganiselo eyahlukeneyo phakathi kwazo zonke iingqondo, kunokuba, kungangcono, ukuba igunya lesayensi kufuneka likwazi ukungazihloneli kwaye lize izifundo okanye izinto ezingaphandle komda osikelwe umda. Kwelinye icala, le meko yokungavisisani nesayensi ithintela ukukhula kwinzululwazi yale mihla, ihlehlise ukufumanisa izinto ezifumanekayo malunga nezinto ezintsha ezenziwayo kwimimandla emitsha, ithwala imithwalo nengqondo engalunganga yesayensi kwaye ke ibambe ingqondo ekufumaneni indlela yokucinga.
Zange kube kudala iijenali ezingqina izimvo zenzululwazi zagculela okanye zigxeka abo bazokwakha oomatshini bokuphapha. Batyhola abo bafuna ukuba ziimpukane ngokuthi bangaphuphi okanye bangaphuphi. Bababambe iinzame zokuba ngababhabhathisi abangazange babe nanto, kwaye ukuba amandla kunye nexesha kunye nemali zichithwe kwimizamo engenamsebenzi leyo kufuneka ziguqulwe zibe zezinye iziteshi ukufumana iziphumo ezisebenzayo. Bayiphinda-phinde into yokuphikisana nabasemagunyeni ukungqina ukungafikeleli kwendiza eyomntu.
Ukubhabha okanye ukubhabha ngoku sisayensi. Iqeshwa ngoorhulumente. Yeyona nto intle ebisenziwa ngabantu bezemidlalo abanesibindi. Ngumxholo wentengiso kunye noluntu jikelele. Iziphumo zophuhliso lwayo ziqwalaselwe ngononophelo kwaye ikamva laso lilindelwe ngolangazelelo.
Namhlanje zonke iijenali zinokuthetha ukudumisa “kweentaka-mntu,” “iintaka,” “iindiza,” kunye noomatshini bazo. Ngapha koko, iindaba malunga ne-pneumatics, i-aerostatics, i-aeronautics, ukuhamba ngenqwelomoya, ukubhabha yeyona nto indala kunye nomtsalane owathi wanika amaphephandaba ukuba anikezele kwihlabathi elilalela.
Ezi moulders zoluvo lwe-pubic zinyanzelwa yinyani kunye noluvo loluntu ukutshintsha izimvo zabo. Banqwenela ukunika uluntu oko kunqwenelwa ngumbono woluntu. Kulungile ukulibala iinkcukacha kunye notshintsho lwezimvo ekuhambeni kwexesha. Nangona kunjalo, yeyiphi na indoda ekufuneka izame ukuba iphilile kwaye kufuneka ikhumbule ntoni ukuba umkhethe kunye nokungazi akunakuhlala ujonga ukukhula kunye nokukhula kwengqondo okanye ukuyeka amandla akhe okubonisa. Umntu unokuziva ezomeleleyo kwimbono yokuba amandla akhe kunye nezinto ezinokubakho ziya kubonakaliswa ngcono ukuba usebenza ngenkuthalo kwingcamango nakwizenzo zento azibona inokwenzeka kwaye ibhetele. Inkcaso enikezelwa kukucalucalulwa kunye noluvo lukawonkewonke inokuthi, ixesha kuphela, ithintele inkqubela yakhe. Ikhethe kunye nezimvo nje ziya koyiswa kwaye zikhukuliswe njengoko kunokwenzeka ukubonakala. Okwangoku, yonke inkcaso inika ithuba lokukhulisa amandla kwaye iyimfuneko ekukhuleni.
Ngamaxesha okubuyela umva, kwengcinga enzulu, ye-ecstasy, indoda, ingqondo, iyazi ukuba ingabhabha. Ngexesha le-elation, ezindlebeni zeendaba ezilungileyo, xa umphefumlo uphefumla ngokungqongqo kwaye ipulse iphezulu, uziva ngokungathi ungaphakama uye phezulu usiya ngezithuba ezi-beckoning eziluhlaza ezingaziwayo. Emva koko ujonga umzimba wakhe onzima aze uhlale emhlabeni.
Iimpungutye ziyabhabha, ihagu ihambe, iintlanzi zibhukude kwaye intaka ibhabhe. Qho emva kokuba izelwe. Kodwa ixesha elide emva kokuzalwa komntu-isilwanyana asinakubhabha, okanye sibhukude, sihambe okanye sikhasa. Eyona nto anokuyenza kukukroba kwaye ukhabe kwaye ukhale. Iinyanga ezininzi emva kokuba ezelwe ufundile ukukrwada; emva komzamo omkhulu uphaphazela ezandleni nasemadolweni. Emva kwexesha nasemva kokungqubeka okukhulu kwaye uyawa. Okokugqibela, ngomzekelo wabazali kunye nolwalathiso oluninzi, uyahamba. Iminyaka inokudlula ngaphambi kokuba afunde ukuqubha, kwaye abanye abafundanga.
Ngoku le ndoda ifumene ummangaliso wokubhabha ngoomatshini, kungabonakala ukuba xa indiza ngenqwelomoya ngenqwelomoya, iya kuba ifikelele kumda wamathuba ayo kubugcisa bokubhabha. Oku akunjalo. Kuya kufuneka kwaye uyenze ngaphezulu. Ngaphandle kwento eyenzekileyo, ngaphandle komntu yedwa, emzimbeni wakhe okhululekileyo, umntu uya kubhabha emoyeni ngokuthanda kwakhe. Uya kukwazi ukuphakama aphakame phezulu njengoko amandla akhe okuphefumla evuma, kwaye akhokele kwaye alawule indiza yakhe ngokulula njengentaka. Ukuba kuyakwenziwa kungekudala kangakanani kuxhomekeka kwingcinga nomzamo womntu. Isenokuba iya kwenziwa ngabaninzi kwaba baphilayo ngoku. Kwiminyaka ezayo onke amadoda aya kuba nakho ukufumana ubugcisa bokubhabha.
Ngokungafaniyo nezilwanyana, umntu ufunda ukusebenzisa umzimba kunye neemvakalelo zakhe ngokufundiswa. Uluntu kufuneka lube nezifundo okanye umzekelo, ngaphambi kokuba bamkele kwaye bazame oko kunokwenzeka kubo. Ukuqubha nokubhabha, abantu baneentlanzi kunye neentaka njengezifundo zento. Endaweni yokuzama ukufumana amandla okanye amandla asetyenziswa ziintaka ekubalekeni kwazo, kunye nokufunda ubugcisa bokuzisebenzisa, amadoda ahlala azama ukuvelisa ubuchule bokusebenzisa kunye nokusebenzisa oko kubhabha. Amadoda ayifumene indlela yokubaleka, kuba acinge ayisebenzela.
Xa umntu ebukele iintaka kwiinqwelomoya zazo, wacinga ngazo kwaye zifuna ukubhabha, kodwa akwanakho ukuzithemba. Ngoku unentembelo kuba uyabhabha. Nangona eye walandelisa emva kwendlela yentaka, akabhabhi njengentaka, engasebenzisi amandla asetyenziswa yintaka ekubalekeni kwayo.
Babonile ubunzima bomzimba wabo kwaye bengayazi imeko yokucinga okanye ubudlelwane bayo neempawu zabo, amadoda aya kumangaliswa yinto yokubaleka kwawo umoya kwimizimba yawo yenyama kuphela. Ke baya kuyithandabuza. Kusenokwenzeka ukuba baya kongeza ugculelo kumathandabuzo, kwaye babonise ngengxoxo kunye namava okuba umntu ongahambelani nendiza akunakwenzeka. Kodwa ngamhla uthile indoda enye inesibindi kwaye ilungele ngakumbi kunabanye iya kubhabha, ngaphandle kwezinye iindlela zomzimba ngaphandle komzimba wayo. Ke abanye abantu baya kubona kwaye bakholwe; kwaye, ukubona nokukholelwa, iimvakalelo zabo ziya kuhlengahlengiswa kwiingcinga zabo kwaye, nabo, baya kubhabha. Ke amadoda awasenakho ukuthandabuza, kwaye ukungabinakho komntu ukubaleka komzimba kuya kuba yinto eyamkelweyo, njengendawo eqhelekileyo njengeziganeko zamandla amangalisayo abizwa ngokuba kukuxhuzula kunye nokukhanya. Kulungile ukuthandabuza, kodwa ungathandabuzi kakhulu.
Isizathu sokubhabha kweentaka zonke akubangakho ngenxa yokuphaphazela okanye ukuphaphazela kwamaphiko aso. Amandla esizathu sokubaleka kweentaka ngamandla athile achukunyiswa zizo, ezibenza ukuba bakwazi ukwenza iinqwelomoya zabo zinde, kwaye banokuhamba emoyeni ngaphandle kokubhabha okanye ukuphaphazela kwamaphiko abo. Iintaka zisebenzisa amaphiko azo ukulungelelanisa imizimba yazo, kunye nomsila njengomhlanga ukukhokela indiza. Amaphiko asetyenziswa ukuqala kwendiza okanye ukubamba amandla.
Amandla asetyenziswa yintaka ukubhabha abakhona emntwini njengokuba kunjalo ngentaka. Nangona kunjalo, umntu akayazi loo nto, okanye ukuba uyawazi amandla, awazi ngokusetyenziswa kwayo.
Intaka iqala ukundiza ngokugqobhoza, yolule imilenze yayo, kwaye isaseke amaphiko ayo. Ngokuhamba komphefumlo, imilenze kunye namaphiko ayo, intaka iyakonwabisa amalungu ayo omzimba, ukuze iwungenise kwimeko ethile. Xa ukuloo meko kubangela amandla okubaleka ukuba ahambe ngendlela yombutho wayo, ngokufanayo njengombane obethelelwa ecaleni kwenkqubo yamacingo ngokujika kwesitshixo kwis switchboard yenkqubo. Xa amandla oshukumizo okubaleka eshukunyiswa, anyanzela umzimba wentaka. Indlela yeflaya ekhokelela kwicala lamaphiko kunye nomsila. Isantya sayo silawulwa kukuxinana kwemithambo kunye nomthamo kunye nokuhamba komphefumlo.
Ezi ntaka azibhabhi zisebenzisa amaphiko azo kuphela zibonakaliswa ngumahluko kumaphiko akumgangatho xa kuthelekiswa nobunzima bemizimba yazo. Inyani ekufanele uyiqaphele, kukuba kunokwehla ngokulinganayo kwindawo yephiko okanye iphiko leentaka xa kuthelekiswa nokwanda kobunzima bayo. Iintaka ezinamaphiko amakhulu kunye nemizimba ekhanyayo ayinakubhabha ngokukhawuleza okanye ubude nje ziintaka ezinamaphiko amancinci xa kuthelekiswa nobunzima bazo. Eyona nto inamandla kwaye inzima intaka kuya kuxhomekeka kumaphiko ayo ukubaleka kwayo.
Ezinye iintaka zilula ngokobunzima xa kuthelekiswa nokusasazeka kwamaphiko azo. Oku akungenxa yokuba bafuna umphiko ukuba ubhabhe. Kungenxa yokuba indawo enkulu yamaphiko iwavumela ukuba anyuke ngequbuliso kwaye aphule amandla okuwa kwawo ngequbuliso. Iintaka ezinde kunye nokubhabha okukhawulezayo kunye nemikhwa yazo engazifuni ukuba ziphakame kwaye ziwele ngequbuliso azidingi kwaye zihlala zingenamaphiko amakhulu.
Obunye ubungqina bokuba amandla okushukumisa iintaka akubikho ngenxa yomphandle kunye nokusebenza kwamaphiko awo, kukuba ngalo lonke ixesha itheko lifuna, intaka inyusa isantya sayo ngokunyusa okuncinci kokuhamba kwamaphiko ayo okanye ngaphandle kolwandiso yokuhamba kwamaphiko nantoni na. Ukuba ixhomekeke kwintshukumo yephiko lokubhabha ngenqwelo moya ukunyuka kwesantya kuya kuxhomekeka kwintshukumo yephiko eyandisiweyo. Into yokuba isantya sayo inganda kakhulu ngaphandle kokunyuka kokuhamba kwamaphiko bubungqina bokuba le nto ihamba ibangelwa ngomnye amandla kuneentshukumo zamaphiko ayo. Esi esinye unobangela wokubaleka kwayo sisizathu sokubaleka.